Somali versions: Waa filmyo iyo waraaqo sharaxaya autism afka Somaliga ah - ARC West
Filmyadan iyo waraaqahani waxa ay badan socdaan filmkii Oercming barriers, oo sharaxaya shookooyinkii walidadii Bristol ee ay caawiso Autism Independence. Filmyadu waxa loogu tala galay in ay ka adlaan autism iyo reeraha ay saamaysay, matkii YouTube, ay dad badani su’aalo ay na soo way dii yeen.
Filimka iyo waraaquhuba waxa ay ku qoran yihiin Somali iyo English ba. Waxa ay sharaxa yaan sida aad ilma haaga u waawin kartid.
1. Muxuu ilmahaygu u duwanyahay?
Marka aanaad garanaynin ilma haagu waxa uu ugu dhaqmayo sida ay udhaqmaan, waa culays iyo warwar. Laakiin qalqaali uun ma aha caruurtu mana xuma. Hadada isleedahay ilma haagu waxa uu leeyahay autism, fiimkan ayaa kuu sharaxaya iyo sida aad caawimo uheli kartid.
Muxuu ilmahaygu u duwanyahay? Waraaq kaga hadlaysa
2. Maxaa dhicikara hadii aan umaleeyo ilma haygu haduu leeyahay autism?
Waxa ay shara xaysaa video gani, marka ilamo la marinayo autism diagnosis. Jidkan oo mararka qaar keeni kara isku buuqid. Waxa ka qayb gala bahaha caafimaadka oo kala duduwan. Laakiin waxa ay dhamaan ku howlan yihiin in ay ku caawiyaan.
Maxaa dhicikara hadii aan umaleeyo ilma haygu haduu leeyahay autism? Waraaq kaga hadlaysa
3. Sidee aan autism u fahmi karaa, aniga oo ka eegaya fikrad Somali?
Dadka qaar waxa laga aabaa in ay ka warwaraan in ilmahoogu waalan yahay ama shaydaan haysto. Laakin autism waxa ay tahay in maskaxda ilmahu ay si duwan ay u wired garaysan tahay. Autism ma tagto laakin macneheedu ma aha qofku ma guulaysan karo. Ilmaha autism leh waxa laga yaabaa in ay ku ad kaato malimeedka qofka waxa kale oo ay leeyihiin kartiyo kale oo aad ubadan.
Video gani waxa aad ka heli doonaa sida aad ilma haaga aad ucaawin kartid.
Sidee aan autism u fahmi karaa, aniga oo ka eegaya fikrad Somali? Waraaq kaga hadlaysa
4. Caawimadeen ayaan helikaraa aniga iyo ilmahayga autism leh?
Qofka autism leh, noloshiisa wuu la noolanaya autism. Dawo malaha autism. Diintu way kaa cawinaysaa aad cope garayso ama aad aamintid xaalada, laaki ma badali karto caawimada ilmuhu ubaahan yahay iyo in aad waxbarto nolosha uu isku dabari karo. Hayadaha caafimaadka ayaa idinka caawinkara sida aad ilma ha ula hadli kartaan ama dhaqankiisa aad max ugala qaban kartaan ku adag.
Waxa ay video gani idiin sharixi kartaa sida aad ilma hiina ucaawin kartaan iyo cawimada aad uheli kartaan.
Caawimadeen ayaan helikaraa aniga iyo ilmahayga autism leh? Waraaq kaga hadlaysa
5. Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya xalaalka iyo autism?
Xanuunada yarida caruurta ku dhacda, waa khatar, noloshana wax yeelikarta, sida MMR ta.
Irbadahani waxa ay ilmahaka caawiyaan in aanuu xanuunadan khatarta ah aanay qaadin caruurta waxa xalaala dhakhtar ama neeras, ama muda ama buufiya.
Video waxa uu sharaxayaa in aanay jirin wax ka dhexeeya autism iyo MMR ka talaalka.
Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya xalaalka iyo autism? Waraaq kaga hadlaysa
Muxuu ilmahaygu u duwanyahay? Waraaq kaga hadlaysa Muxuu ilmahaygu u duwanyahay?
Maxaa dhicikara hadii aan umaleeyo ilma haygu haduu leeyahay autism? Waraaq kaga hadlaysa Maxaa dhicikara hadii aan umaleeyo ilma haygu haduu leeyahay autism?
Sidee aan autism u fahmi karaa, aniga oo ka eegaya fikrad Somali? Waraaq kaga hadlaysa Sidee aan autism u fahmi karaa, aniga oo ka eegaya fikrad Somali?
Caawimadeen ayaan helikaraa aniga iyo ilmahayga autism leh? Waraaq kaga hadlaysa Caawimadeen ayaan helikaraa aniga iyo ilmahayga autism leh?
Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya xalaalka iyo autism? Waraaq kaga hadlaysa Waa maxay xidhiidhka ka dhexeeya xalaalka iyo autism?